Iyada oo ay karo iyo bandhigay xal sare, iPad waa weyn u arkaysid sawiro. Haddii aad qabto wax badan oo sawiro xiiso leh oo ku saabsan computer, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad si aan u muujiyo in aad qoyska iyo saaxiibada iyadoo la isticmaalayo aad iPad. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay in ay sawiro ka computer wareejiyo iPad hore. In this article, waxaana idin tusin 3 hab oo ku saabsan sida loo sawiro ka PC wareejiyo iPad.
Habka 1. Isticmaal Lugood si ay u gudbiyaan Photos ka Computer si ay iPad
Habka 2. Isticmaal TunesGo si ay u gudbiyaan Pictures ka Computer si ay iPad
Habka 3. Top 3 Apps si ay u gudbiyaan Photos ka Laptop in iPad
Waxaad isticmaali kartaa Lugood inay sawiro in iPad wareejiyo kombiyuutar, laakiin waxa ay ka saari doonaan oo dhan photos exsiting badbaadiyey on iPad Photo Library. Si kastaba, hoos ku qoran waa tutorial ah tallaabo-tallaabo.
Tallaabada 1. Open Lugood on your computer iyo xiriiriyaan iPad in computer.
Tallaabada 2. Riix si aad iPad hoos AALADAHA galeeysid bidix.
Tallaabada 3. Click on the Photos tab iyo hubi sanduuqa nidaameed Photos ka .
Tallaabada 4. Dooro Dooro Folder oo heli folder la sawiro aad rabto in lagu wareejiyo si aad iPad.
Tallaabada 5. Click on the Codso button helay hoose.
Wondershare TunesGo ama Wonershare TunesGo (Mac) waa computer awood leh in ay iPad qalab kala iibsiga sawir. Waxa ay caan ku ahayd tayo sare leh. Sidaa daraadeed, waxaad awood u sawirada kombiyuutar gudbaayo iPad si fudud oo effortlessly. Intaa waxaa dheer, waxa aad awood si ay u abuuraan albums cusub si loo badbaadiyo sawiro laga keeno.
Hoos waxaa ku tutorial sida loo sawiro ka computer wareejiyo talaabo talaabo iPad. Raac waxa.
Tallaabada 1. Ka dib degsado iyo ku rakibidda TunesGo, waa in aad u ordaan on your computer.
Tallaabada 2. Isku aad iPad si aad u computer via cable USB ah. Barnaamijkan ogaan doonaa iPad sida ugu dhakhsaha badan uu ku xiran.
Tallaabada 3. In column bidix, guji Photos inay soo qaadaan suuqa kala maamulka sawirka. Riix saddexagalka hoos Add . In liiska hoos-hoos u, doortaan. Ku dar Folder in ay sawiro ka PC wareejiyo iPad.
1. WordPress 28.1 MB 3.5 / 5 Waxaa loo baahan macruufka 7.0 ama ka dib.
EPhoto 2. Transfer 8.3 MB No Waxaa loo baahan macruufka 5.0 ama ka dib.
3. Transfer Simple 5.5 MB 4.5 / 5 Waxaa loo baahan macruufka 5.0 ama ka dib.
WordPress waa adeeg lacag la'aan ah daruur kaydin jiray oo uu kuu ogolaanayaa inaad si loo badbaadiyo iyo waraaqaha ay helaan, sawiro iyo videos meel kasta oo ka qalab kasta. Si sawiro ka PC wareejiyo iPad, waxaad ku rakibi karaa app WordPress on your iPad. Hoos waxaa ku qoran talaabo by tutorial tallaabo ku saabsan sida loo isticmaalo DropBox in ay sawiro ka PC wareejiyo iPad. Tutorial wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood.
Tallaabada 1. Calaamad akoonka aad DropBox. Waxaa loo baahan yahay in aad buuxiso ilaa magacaaga hore, Magaca awoowe, email iyo password.
Tallaabada 2. Click on the Upload button. Markaas, guji Dooro File . Dooro sawirka ee aad PC in aad rabto in lagu wareejiyo si aad iPad.
Tallaabada 3. Photos bilaabaan in ay geliyaan oo aad ka arki kartaa bar horumarka waqti ku haray ah.
Tallaabada 4. koombiyuutarka Marka aad dhamaysid, guji qabtay . Hadda waxaad arki kartaa sawirka aad daruur DropBox.
Tallaabada 5. aad iPad, u tag App Store iyo nooca DropBox sanduuqa raadinta. Download app. Tallaabada 6. Marka dajinta lagu sameeyo, u furan DropBox. Gal u galay. Tallaabada 7. Tubada sawir aad uploaded ka PC on. Tubada on icon download helay on xaq sare. Markaas, garaac S Ave in Photo Library .
EPhoto 2. Transfer
Transfer ePhoto waa app macruufka ah ee loogu talagalay wareejinta sawiro iyo videos u dhexeeya qalabka iyo kombiyuutarada macruufka isticmaalaya Wi-Fi. App waa habboon in la isticmaalo tan iyo markii aad mar dambe u baahan tahay in ay isticmaalaan xargo kasta oo ay u guuraan sawiro ka iPhone ama iPad si aad u computer. Intaa waxaa dheer, waa wax loo baahan yahay si loo soo dajiyo wax aad kombuutarka. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa si fudud u soo bixi app ka App Store ah.
Waa kuwan tallaabooyinku ku saabsan sida ay u guuraan sawiro ka PC aad iPad isticmaalaya app.
Tallaabada 1. aad iPad, u tag App Store iyo nooca ePhoto xor ah sanduuqa raadinta. Download app.
Tallaabada 2. Open app iyo waxaad ka arki kartaa cinwaanka ah bandhigay on shaashad ugu weyn ee app.
Tallaabada 3. Open browser web aad kombuutarka iyo nooca cinwaankan. (Tusaale ahaan http://192.168.10.100)
Tallaabada 4. app ayaa aad iPad bandhigayaa heegan ah oo oranaya your computer doonayo in ay ku xidhmaan aad iPad. Tubada ku ogolow button.
Tallaabada 5. heegan kale waxaa soo bandhigay screen in weydiineysaa haddii aad u oggolaadaan app Transfer ePhoto ah si ay u helaan sawiro aad. Tubada OK .
Tallaabada 6. aad PC, waxaad ka arki kartaa gal Photos magacaabay. Waxaa Click. Markaas, folder magacaabay Roll Camera muuqataa. Mar kale, waxa guji.
Tallaabada 7. Qeybta hoose, guji Dooro File . Dooro sawirka ka PC in aad rabto in lagu daro in aad iPad. Riix Upload File . Hadda waxaad arki kartaa in sawirka lagu daray aad iPad.
3. Transfer Simple
Transfer Simple waa app ah loo isticmaalo si ay u gudbiyaan sawiro iyo videos wirelessly dhexeeya iPad iyo PC. Photos wareejiyo isticmaalaya app ku adkayso xal buuxa. Sidoo kale, videos ayaa sidoo kale loo wareejiyay leh tayada ugu sarraysa. Tilmaamo ku saabsan sida loo sawiro ka PC wareejiyo si aad iPhone ama iPad isticmaalaya app waxaa hoosta laga helay.
Tallaabada 1. aad iPad, u tag App Store iyo nooca Transfer Simple sanduuqa raadinta. Download app.
Tallaabada 2. Open app ka gurigaaga screen iPad ee, waxaad ka arki kartaa cinwaanka ah bandhigay on shaashad ugu weyn ee app.
Tallaabada 3. Open browser web on your computer iyo nooca cinwaankan. (Tusaale ahaan http://192.168.10.100)
Tallaabada 4. Riix Upload Device button helay album Roll Camera ah. Dooro sawirka aad rabto in lagu daro in aad iPad. .
Tallaabada 5. Click Upload . Wargelin u muuqataa on browser aad PC ayaa sheegay in faylka ayaa si guul leh loo wareejiyay aad iPad.
Bedelka Photos ka iPhone in iPad
Bedelka Photos ka Mac in iPad
> Resource > iPad > 3 Hababka si ay u gudbiyaan Photos ka PC in iPad